Ihe na -esi ísì ụtọ nke Akwụkwọ Nsọ na Mkpa ime mmụọ ha - Ihe Bible Pụtara
m ekwentị 6 agaghị akwụ ụgwọ
jikọọ iphone 6 na ngwa nbipute
mechie iphone na -enweghị bọtịnụ ike
otu esi agbanwe usoro ịkwụ ụgwọ na ụlọ ahịa ngwa
akpọchiri ipad jikọọ na iTunes
Ihe na -esi ísì ụtọ nke Akwụkwọ Nsọ na Mkpa ime mmụọ ha.
Ndị kasị mkpa mmanụ na Bible
Dị ka amaara, mmalite Jenesis na -akọwa ubi ebe Adam na Iv bi n'etiti ihe na -esi ísì ụtọ nke okike. N'amaokwu ndị ikpeazụ, e zoro aka na ịgbari ozu Josef, nke a na -ejikọ ya na ngwakọta mmanụ dị mkpa na mmanụ ihe oriri. Mmanụ abụọ dị mkpa na -apụtakarịkarị na Baịbụl bụ myrrh na frankincense.
( Commiphora myrrha ). Myrrh bụ resin nke a na -enweta site na osisi nke otu aha, sitere na ezinụlọ Burseráceas, nke sitere na gburugburu Oké Osimiri Uhie. Bittersì ísì ya dị omimi na ihe omimi na -amata mmanụ ya. Myrrh bụ nke kacha akpọ aha n'ime Akwụkwọ Nsọ, bụrụkwa onye mbụ, na Jenesis (37:25) na nke ikpeazụ, yana ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ, pụtara Mkpughe nke Jọn Jọn (18:13).
Myrrh bụ otu n'ime mmanụ ndị na -agụ kpakpando wetara site n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ dị ka onyinye nye nwa amụrụ ọhụrụ Jizọs. N’oge ahụ, a na -eji myrrh egbochi ọrịa nje eriri afọ. Mgbe ọnwụ Jizọs, a kwadebere ozu ya na sandalwood na myrrh. Myrrh wee soro Jizọs malite mgbe a mụrụ ya ruo ọnwụ nkịtị ya.
Mmanụ ya nwere ikike pụrụ iche ịgbatị isi nke mmanụ ndị ọzọ na -agbanyeghị ya, nke na -eme ka ogo ha ka mma. Mana n'onwe ya, o nwere ọtụtụ ihe na -agwọ ọrịa: ọ na -ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma nwee mmetụta antiseptik; Ọ bụ nnukwu ọgwụ mgbochi nrụgide n'ihi na ọ na-eme ka ọnọdụ ahụ ka mma site na mmetụta nke sesquiterpenes (62%) na hypothalamus, gland pituitary na tonsil.
Ọtụtụ ọdịbendị mara uru ya: ndị Ijipt na -eyi cones nke griiz nke nwere myrrh n'isi ha iji chebe onwe ha pụọ ​​n'ọtịta ahụhụ na ajụkwa oyi n'ọzara.
Ndị Arab na -eji myrrh eme ihe maka ọrịa anụ ahụ yana iji lụso ndọlị. N'ime agba ochie, ekwuru na onye Juu Esther, onye ga -alụ eze Peshia Ahasuerọs, nọrọ ọnwa isii tupu agbamakwụkwọ ahụ na -asa ahụ na myrrh.
Ndị Rom na ndị Gris jiri myrrh maka ụtọ ilu ya dị ka ihe mkpali agụụ na mgbaze. Ndị Hibru na ndị ọzọ Akwụkwọ Nsọ na -ata ya dị ka a ga -asị na ọ bụ chịngọm iji zere ọrịa ọnụ.
Ihe nsure ọkụ
( Boswellia carteri ). Ọ na -abịa site na mpaghara Arab ma jiri isi ísì ụtọ mara ya nke ukwuu. A na -enweta mmanụ site na mmịpụta na mwepụ nke resin ahụ site n'ụgbụgbọ osisi ahụ. N'Ijipt oge ochie, a na -ahụta ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ dị ka ọgwụgwọ ọgwụgwọ zuru ụwa ọnụ. Na ọdịbendị ndị India, n'ime Ayurveda, ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ na -arụkwa ọrụ dị mkpa.
Tinyere myrrh, ọ bụ onyinye nke ọzọ ndị dibịa anwansị si Ọwụwa Anyanwụ wetaara Jizọs:
… Mgbe ha bara n'ime ụlọ, ha hụrụ nwatakịrị ahụ na nne ya, Meri, na -akpọkwa ya isiala, ha wee kpọọrọ ya isiala; mgbe ha mepere akụ ha, ha nyere ya onyinye: ọla edo, frankincense, na myrrh. (Matiu 2:11)
N'ezie ndị Magi nke Ọwụwa Anyanwụ họọrọ ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ n'ihi na ọ bụ omenala ka a na -ete mmanụ nke ndị eze na ndị nchụàjà.
Ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ nwere mmetụta mgbochi mkpali ma gosipụta ya maka rheumatism, ọrịa afọ ọsịsa, ụkwara ume ọkụ, bronchitis, ndọlị, na adịghị ọcha akpụkpọ.
A na -enyekwa ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ nke metụtara nsụhọ. N'ihi ya, ọ na -arụ ọrụ dị mkpa n'ịtụgharị uche. A na -eji ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ n'ụdị wand ma ọ bụ cone na ụlọ nsọ yana maka ebumnuche dị nsọ n'ozuzu ya. Bsì balsamic ya pụrụ iche ma bụrụkwa ihe dị mkpa na ihe ndị na -esi ísì ụtọ.
( Chamaecyparis ). Cedar yiri ka ọ bụ mmanụ mbụ enwetara site na distillation. Ndị Sumer na ndị Ijipt jiri usoro a nweta mmanụ na -agbasi ozu dị oké ọnụ ahịa na iji gwọọ nje. A na -ejikwa ya maka idebe omenala na ilekọta ndị ọrịa ekpenta, yana ichekwa onwe ha pụọ ​​na ụmụ ahụhụ. Mmetụta ya siri ike nke na kabinet nke osisi a na -enwe ike idobe nla.
Mmanụ Cedar mejupụtara 98% sesquiterpenes nke na -akwado ikuku oxygen na ụbụrụ na -akwado echiche doro anya.
Osisi sida na -eme ka ụra ka mma site na mkpali nke homonụ melatonin.
Mmanụ ahụ bụkwa ihe na -egbu egbu, na -egbochi ọrịa urinary, na -emegharịkwa akpụkpọ ahụ. Ejirila ya n'ọrịa dịka bronchitis, gonorrhea, ụkwara nta na ntutu isi.
( Osisi cinnamomum cinnamon na mmanụ a (ụ) ezi cinnamon ). Ha sitere na ezinụlọ laureceae (laurels) ma yie isi. Abụọ mmanụ nwere antiviral na antibacterial Njirimara.
Cinnamon bụ otu n'ime mmanụ antimicrobial kacha dị ike nke dị adị. Ọ bụkwa ihe na -akpali agụụ mmekọahụ.
Site na inhalation ma ọ bụ iji mmanụ abụọ na -ete ọbụ ụkwụ, enwere ike iwusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma chebe ya pụọ ​​na oyi.
Cassia bụ otu n'ime ihe mejupụtara mmanụ dị nsọ nke Moses. A kọwara nke a n'Ọpụpụ (30: 23-25):
Were kwa ude ọma kachasi nma: mmiri myrrh, narị shekel ise; nke pawuda aromatic, ọkara, narị abụọ na iri ise; na okpete aromatic, narị abụọ na iri ise; nke cassia, nnù shekel na ọgu ise, dika okirikiri nke ebe nsọ si di, na otù hin nke manu olive. I g ofwere kwa ya me manu nke otite -manu di nsọ, bú manu -otite n mixturesì ísì utọ, ọlu nke onye nāsugwa manu -otite n ;sì ísì utọ; ọ ga -abụ mmanụ e ji ete mmadụ mmanụ.
Ihe na -esi ísì ụtọ
( Acorus calamus ). Ọ bụ osisi Asia nke na -etokarị na mmiri apịtị.
Ndị Ijipt maara calamus ahụ dị ka mkpanaka dị nsọ yana maka ndị China, ọ nwere ikike ịgbatị ndụ. Na Europe, a na -eji ya dị ka agụụ na -akpali ma na -enye ume. Mmanụ ya bụkwa akụkụ nke nsọ e tere Mozis. E jikwa ya mere ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ ma na -ebu ya dị ka ihe nsure ọkụ.
Taa, a na -eji mmanụ ahụ arụ ọrụ akwara, mbufụt, na nsogbu iku ume. [Ibe akwụkwọ]
( gummosis mkpisi ). Ọ bụ nke ezinụlọ Apiaceae, dị ka pasili, ma nwee njikọ na fennel. Sì mmanụ ya na -esi ísì ma na -akwụsịtụ n'ụzọ mmetụta uche. A na -enweta balsam site na mmiri ara ehi nke mgbọrọgwụ ya kpọrọ nkụ, nke, n'ihi mmetụta dị mma ya na nsogbu ụmụ nwanyị dị ka mgbu ịhụ nsọ, a maara dị ka resin nne. Ọ bụ antispasmodic na diuretic. A na -eji mmanụ ahụ meziwanye nsogbu nri nri, ọrịa iku ume, yana ibelata ndọlị.
Ndị Ijipt ji galbanum were resin gummy ha mee ozu ozu ha. A na-ejikwa ya dị ka ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, a na-ekwukwa na ọ nwere mmetụta mmụọ miri emi dị ka a hụrụ na Ọpụpụ (30: 34-35):
Jehova wee gwa Mozis, sị: Were mmanụ na -esi ísì ụtọ, okporo ọka, ntu na -esi ísì ụtọ na galbanum na -esi ísì ụtọ na ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ; ịha nhata, ị ga -ejikwa ya mee ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ, ihe na -esi ísì ụtọ dị ka nka onye na -esi ísì ọma si agwakọta, gwakọtara nke ọma, dị ọcha ma dịkwa nsọ.
( Styrax benzoin ). A makwaara ya dị ka benzoin ma ọ bụ ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ Java. Ọ bụ mmanụ na -acha odo odo ma na -esi ísì yiri nke vanilla. A na -ejikarị ya eme ihe n'oge ochie dị ka ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ n'ihi ísì ụtọ ya dị ụtọ. Ọ na -amasị izu ike miri emi, na -enyere aka ihi ụra, a na -ejikwa ya megide ụjọ na mgbakasị ahụ. Ọ nwere mmetụta nhicha miri emi. N'ihi ya, a na -ejikwa ya na nlekọta anụahụ.
( Nardostachys jatamansi ). Na ndagwurugwu mmiri na mkpọda ugwu Himalaya na -esi ísì ụtọ na -esi ísì ụtọ. Mmanụ ya bụ otu n'ime ihe kacha baa uru ma ejiri ya tee ndị eze na ndị nchụàjà mmanụ. Dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, e nwere oké ọgba aghara mgbe Meri nke Betani jiri mmanụ tuberose nke ọnụ ahịa ya karịrị denarii 300 tee ụkwụ na ntutu Jizọs mmanụ (Mak 14: 3-8). O doro anya na Judas na ndị na -eso ụzọ ndị ọzọ bụ ihe efu, mana Jizọs ziri ezi.
Ọ na -achọpụta na mmanụ ahụ na -achịkwa ijikọ ahụ na ụgbọ elu ime mmụọ. Ọ na -enwe mmetụta siri ike na sistem ụjọ, na -eme ka obi dajụọ, ma na -akwalite ụra. A na -eji ya na allergies, migraines, na dizziness. Na -ewusi obi ike ma na -enye udo nke obi.
( Hyssopus officinalis ). Ọ bụ nke ezinụlọ Lamiaceae, na Gris oge ochie, ejiri ya mee ihe maka atụmanya na ọsụsọ na oyi, ụkwara, bronchitis, flu, na ụkwara ume ọkụ. Ndị nke Akwụkwọ Nsọ jiri ya sachapụ ndị mmadụ ihe riri ahụ na agwa ọjọọ. Yabụ, n'Abụ Ọma 51, 7-11, ekwuru:
Were m ahịhịa hisop sachapụ m, m ga -adịkwa ọcha; saa m, m ga -adị ọcha karịa snow. Mee ka m nụ ọ joyụ na ọ joyụ; Ka ọkpụkpụ ndị ị gbajiri wee rejoiceụrịa ọ .ụ. Zobe ihu gị na mmehie m wee hichapụ ajọ omume m niile. Kwere m, Chineke, obi dị ọcha, meekwa ka mmụọ ezi omume dị ọhụrụ n'ime m. Achụpụla m n'ihu gị, narakwala m Mmụọ Nsọ gị.
Iji nweta nchebe n'aka mmụọ ozi nke Ọnwụ, ndị Israel tinyere ahịhịa swab n'ọnụ ụzọ ụzọ.
Eji hyssop mee ihe, ọkachasị n'ihe gbasara ọnọdụ iku ume dịka ụkwara ume ọkụ.
( myrtle nkịtị ). A na -enweta mmanụ ahụ site na mwepụ nke akwụkwọ osisi, alaka, ma ọ bụ ifuru nke osisi myrtle, nke juru ebe niile na mpaghara Mediterenian.
Myrtle nwere ihe pụtara ịdị ọcha. Ọbụnadị taa, a na -eji alaka ndị ahụ na okooko osisi agbamakwụkwọ ebe ọ bụ na ha na -anọchite anya ịdị ọcha. Ekwuru na Rome oge ochie na Aphrodite, chi nwanyị mara mma na ịhụnanya, si n'oké osimiri pụta na -ejide alaka myrtle. A na -eji myrtle n'oge Bible maka emume okpukpe yana maka ememme nsacha.
Onye na -ahụ maka aromatherapist nke France Dr. Daniel Pénoel chọpụtara na myrtle nwere ike ime ka ọrụ nke ovaries na thyroid rụọ ọrụ. A pụkwara ime ka nsogbu iku ume ka mma site na ịmị mmanụ a ma ọ bụ ịnweta nchacha obi. Isi ísì ụtọ nke ahịhịa myrtle na -ewepụta ikuku ikuku.
Tụkwasị na nke ahụ, mmanụ kwesịrị ekwesị iji luso afọ ntachi ọgụ ma na -enyere aka na psoriasis, ọnya, na mmerụ ahụ.
( Ndekọ Santalum ). Osisi sandalwood, nke sitere na ọwụwa anyanwụ India, ka a na -ahụta dị ka ihe dị nsọ n'ala nna ya. Na ọdịnala ahụike ndị India nke Ayurveda, amalarị ọgwụ antiseptik ya, mgbochi mkpali na mmetụta antispasmodic.
Sandalwood, nke na-esi ísì ụtọ, mara na Bible dị ka aloe, n'agbanyeghị na o nweghị ihe jikọrọ ya na osisi aloe vera a ma ama. A marala Sandalwood maka ihe nkwado ya na ntụgharị uche yana dịka aphrodisiac. E jikwa mmanụ agba ozu.
Taa, a na -eji mmanụ a (ọtụtụ mgbe, adịgboroja) maka nlekọta anụ ahụ iji meziwanye ụra na ịhazi usoro endocrine nwanyị na usoro ịmụ nwa.
Gwupụta akụ ahụ
Enwere ike weghachite mmanụ nke Akwụkwọ Nsọ echefuru ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma taa. N'ime ísì ụtọ ha, ha nwere ike ochie nke anyị chọrọ karịa mgbe ọ bụla.
Ọgụgụ Akwụkwọ Nsọ Jared - Gịnị ka Jared pụtara?
IHE BAỊBỤL PỤTARA AHA
NTỤKWU BAỊBỤL NA -ECHICHE HALO N'OGE ỤLỌ
Nkọwa nke Akwụkwọ Nsọ Nrọ Maka Ịdị ime